Radio Don Bosco - Masimbavy Eudoxie
01 marsa — I Eudoxie dia misy ihany koa ny miantso azy hoe Eudocie na Eudocia. Martiry maty tamin'ny taona 114 izy io. Niaina nandritra ny nanjakan'ny Amperora Trajan i Eudoxie. Samaritanina nibebaka, vehivavy mpanan-karena niaina tao Héliopolis tany Liban ary niaina tao anatin'ny rendrarendran'izao tontolo izao.
Indray andro nisy mpitoka-monina nitantara taminy ny Evanjely momba an'i Lazare mahantra. Tohina ary nitomany i Eudoxie. Nibebaka izy, nozarainy tamin'ny mahantra avokoa ny fananany ary nandeha nihidy tany amin'ny trano fitokana-monina tany an-tany efitra izy. Nisy olon-tiany taloha, tsy mpino, tonga mba hiverina aminy nefa maty tampoka tao io lehilahy io, nefa noho ny vavaka nataon'i Eudoxie tamin'i Kristy dia nitsangan-ko velona ilay lehilahy. Nampangaina tamin'ny Governora tamin'ny zavatra tsy nataony izy ka nohelohina ho faty.